Mila ny firaisan-kinantsika rehetra aho.
mercredi, 08 août 2018 08:52
Tsy maro resaka aho, mandiniha lalina isika fa io harena marobe eto amintsika io no mampirangorango ireo vahiny, ka mampiasa ireo Malagasy mpivarotra Tanindrazana.
Hitobaka ny vola amin'ny fifidianana, dia ho vidiany ambongadiny eto isika mianakavy. Ary 40-50 taona ny contrat minier iray raha kely indrindra. Ary 1% ny anjaran'ny Malagasy amin'izany, raha ho hitanao akory aza izany.
Ny ahy efa mazava, miankina amintsika aho, na ho fanohanana ara-bola, na fananganana komity mpanohana, na ny hanara-maso ny vatotsika amin'ny fifidianana, tena hitondra ny fampandrosoana marina isika arak'ireny tetikasa efa naroso marobe teto ireny.
Vonona moa isika, dia miroso aho, samy mandray anjara amin'izay vitany na ara-bola na ara-panohanana.
Ilaina ny vavaka, zava-dehibe izany, fa fotoana ihany koa izao hanaovana rakitra. Tsy atao mahamenatra izany, Firenentsika ity, aza manaiky pepoin'olona hoe kandida tsy manam-bola ka ho resy. Aleo isika resy toy izay hivarotra Tanindrazana.
Mety manam-bola ireo, izay vola halatra sy famotsiam-bola rehetra io, fa ny tetikasatsika no alainy tahaka ampandriana adrisa, fa hafa ny tanjonandreo.
Aza mijery ny hafa hoe, ny any ambanivohitra sy ireo lavitra sy tsy mahay taratasy no mora voavidy amin'ny tee-shirt sy vary fotsy sy hirahira, fa ianao no jereo, resy lahatra ve ianao, dia ataovy izay tandrify anao, raha ianao tsy maharesy lahatra olona 10 izay tsy manao serasera eto, dia manontania tena ihany koa.
Raha toa kosa, tsy mbola tena resy lahatra, fa feno fisalasalana sy feno fanontaniana maro, na tsy resy lahatra mihitsy isika, dia tsy nahomby aho izany, ka ataoko ahoana hitondra Firenena izay novidiako vola no ahalany ahy, nefa ny Malagasy ho entiko tsy resy lahatra amin'ny lalana itondrako azy, dia aleoko manohy ny fiainako an-davan'andro.
Araka ny teniko hatrany, tsy mandany andro amin'ny zavatra tsy ho vitako aho, ary tsy ny politika no namelona ahy, ampy ahy sy ny fianakaviako ny kely hananako, aleoko mandany ny fotoanako amin'ny fianakaviako sy ny zafikeliko.
15 andro sisa no ananantsika hanapahana hevitra, na olon-tsotra isika, na mpandraharaha.
Mirary soa antsika rehetra.